Nezvedu - Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.mutengesi akasarudzika wezvinhu zvekushambadzira.Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira baseball caps, heti yakarukwa, zvivharo zvemitambo, visor yezuva, apron, bhegi rekutenga, tauro, gurovhosi zvichingodaro.
Isu zvakare taigona kugadzira zvinoenderana nemagadzirirwo evatengi kana masampuli.Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune ese pasirese, kunyanya musika weEuropean neNorth America.
Hunhu ndiko kukosha kwekutanga.Isu tinotarisisa kunaka kwezvigadzirwa, zvinosanganisira zvinhu zvemucheka, zvishongedzo, magadzirirwo, kurongedza, nguva yekutumira, kuchengetedzwa pamwe nemamwe masevhisi, zvichingodaro, vashandi vedu veQC vanovaita. muhutano hwakanaka.Hunhu hwedu hwakagamuchirwa nevatengi vedu vese mhiri kwemakungwa uye kunakidzwa nemukurumbira wakanaka.Mushoko, chinangwa chedu ndechekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vese vatengi vedu mumutengo unonzwisisika.
Muna 2016, kambani yedu yakagadzira chirongwa chitsva, hydroxypropyl methyl cellulose, iyo inonyanya kushandiswa kugadzira dhaka reSimende, Tile simende, Gypsum coagulation slurry, Seam simende, Coating Auxiliary Agents.Kana iwe uchifarira, ndapota taura nesu, tinogona kuve nechokwadi chemhando yepamusoro uye sevhisi kwauri.
Kukwanisa kwedu kugadzira kunopfuura 200,000 pcs mumwedzi mumwe chete.
Isu tine tarisiro yechokwadi yekushandira pamwe nechero makambani angade kuunza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemitengo inonzwisisika kubva kuChina, uye isu tinoda zvakare kumisa hukama hwakanaka hwebhizinesi uye hushamwari newe kwenguva yakareba sekunge vatengi vedu vekare.
Isu takatendeseka uye takatsunga kushandira pamwe nevatengi vedu vese uye tinotarisira kumisa hukama hunobatsira uye hwakagadzikana neshamwari dzakawanda.Kana iwe uchitsvaga chivharo, apuroni, bhegi rekutenga, tauro, mutengesi wegirovhosi kuChina, ndapota taura nesu kuti uwane zvimwe. details.Any inquiries form uchapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana.
baba chivharo baba golf cap baba mutambo chivharo flat peak hat Custom embroidery logo baba heti snapback hat